विश्वका छटौं धनी व्यक्ति अनिल अम्बानी कसरी आए सडकमा ? तीन महिना जे'ल जाने अवस्था सम्ममा पुगेका थिए - Himali Patrika
विश्वका छटौं धनी व्यक्ति अनिल अम्बानी कसरी आए सडकमा ? तीन महिना जे’ल जाने अवस्था सम्ममा पुगेका थिए
हिमाली पत्रिका ११ असोज २०७७, 7:50 pm
११ असोज, काठमाडौं । भारतीय उद्योगी अनिल अम्बानी कुनै समय विश्वका धनी ६ व्यक्तिको सूचीमा पर्थे । तर अनिल धिरुभाइ अम्बानी ग्रुप (एडीएजी) का अध्यक्ष उनी अहिले टाट पल्टिएका छन् ।
आफू जमानी बसेर लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि अनिल अम्बानीले अहिले मुद्दा खेप्नुपरेको हो । अम्बानीले भनेका छन्, ‘मेरो खर्च न्यूनतम छ र त्यो खर्च मेरी पत्नीले परिवारलाई दिँदै आएकी छन् ।’
सन् २००२ मा उनीहरुका बुबा धिरुभाइ अम्बानीको निधन भयो । त्यसपछि मुकेश अम्बानी रिलायन्स इन्डष्ट्रीको अध्यक्ष बने भने अनिल प्रबन्ध निर्देशक । तर २००५ मा आइपुग्दा दाजुभाइको बीचमा मनमुटाव बढ्यो । त्यसपछि उनीहरु दुई भागमा विभाजित भए । टेलिकम, ऊर्जा उत्पादन र वित्तीय सेवाको व्यवसाय अनिल अम्बानीले राखे । दाजुको भागमा तेल शुद्धिकरण र पेट्रोकेमिकल व्यवसाय पर्‍यो ।
रिलायन्स कम्युनिकेशनले सन् २००२ मा रिलायन्स इन्फोकमको रुपमा सीडीएमए प्लेटफर्ममा आफ्नो टेलिकम सेवा शुरु गरेको थियो । शुरुमा त कम्पनीले राम्रै गरेको थियो । तर यसले थ्रीजीसम्म मात्र सपोर्ट गर्ने भएकाले फोरजी आएसँगै रिलायन्स कम्पनीको क्रेज घट्यो र त्यसको असर व्यापारमा देखियो । यो अवधिमा कम्पनीले ग्राहकहरु तान्न विभिन्न किसिमको योजना ल्याउने र सस्तोमा सेवा प्रदान गर्ने काम गरे । त्यसका लागि ऋण लिए । व्यवसाय भने निरन्तर ओरालो लाग्यो । साथै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता लान थालेसँगै कम्पनीको ऋण बढ्दै गयो ।